Ndingaitei Kuti Ndirege Kunyanya Kusuruvara? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
“Shamwari dzangu padzinosangana nematambudziko ndinodzibatsira kuagadzirisa uye zvinhu zvinobva zvavafambira zvakanaka. Asi vanhu vakawanda havazivi kuti pandinoenda kumba ndinonozvivharira mumba ndotanga kuchema pamusoro pematambudziko andinawo.”—Kellie.
“Pandinenge ndakaora mwoyo, ndinogara ndiri ndega. Pandinokokwa nevamwe, ndinotsvaga zvikonzero zvokuti ndisaenda. Ndinogona kuita kuti vomumhuri mangu vasaona kuti ndakasuruvara. Vanofunga kuti zviri kundifambira zvakanaka.”—Rick.
Wakambovawo nepfungwa dzakafanana nedzaKellie kana kuti Rick here? Kana zvakadaro, usakurumidza kufunga kuti pane zvisina kumira zvakanaka pauri. Chokwadi ndechokuti munhu wose anosuruvara apo neapo. Ndizvowo zvaiitika kune varume nevakadzi vakatendeka vemuBhaibheri.—1 Samueri 1:6-8; Pisarema 35:14.
Dzimwe nguva unogona kuziva zvinenge zvaita kuti usuruvare; asi dzimwe nguva ungasazviziva. Anna ane makore 19 anoti, “Hazvirevi hazvo kuti unosuruvara chete kana waomerwa noupenyu. Unogona kusuruvara chero nguva kunyange usina kana dambudziko muupenyu hwako. Hazvitsananguriki, asi zvinoitika!”
Pasinei nokuti zvii zvakakonzera—kunyange zvichiita sezvisipo—ungaitei kana wanyanya kusuruvara? Edza kuita zvinotevera:
Taura zviri kukunetsa. Paaishushikana mupfungwa, Jobho akati: “Ndichataura mweya wangu uchirwadziwa!”—Jobho 10:1.
Kellie anoti: Pashure pokutaura nemumwe munhu ndinonzwa ndarerukirwa. Pakupedzisira, mumwe munhu anenge ava kuziva dambudziko rangu. Anogona kundibatsira kukunda dambudziko racho!
Nyora zviri kukunetsa. Kana kusuruvara kwaita kuti usava netariro muupenyu, ungada kuedza kunyora papepa manzwiro auri kuita. Mumapisarema ake akafuridzirwa, dzimwe nguva Dhavhidhi aitaura nezvekusuruvara kwakanyanya kwaaiita. (Pisarema 6:6) Kunyora nezvemanzwiro akadaro kungakubatsira kuti ‘uchengetedze uchenjeri hunobatsira nemano okufunga.’—Zvirevo 3:21.
Heather anoti: Kusuruvara kunoita kuti ndivhiringidzike asi kunyora pasi zvinhu zviri kundinetsa kunondibatsira kuti ndizive zvokugadzirisa. Paunonyora nezvemanzwiro ako wobva wagadzirisa dambudziko racho kusuruvara kunobva kwadzikira.
Nyengetera nezvezviri kukunetsa. Bhaibheri rinoti kana ukanyengetera pamusoro pezvinokunetsa, ‘rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose rucharinda mwoyo wako nesimba rako rokufunga.’—VaFiripi 4:6, 7.
Esther anoti: Ndaiedza kutsvaka chaiita kuti ndinzwe ndakasuruvara, asi ndaichishayiwa. Ndakakumbira Jehovha kuti andibatsire kuti ndifare. Zvaindivhiringidza kuti ndaisuruvara pasina chikonzero. Pakupedzisira zvokusuruvara zvakapera. Usarerutsa simba remunyengetero!
Kana ukabatsirwa uye iwe ukaita pako, unogona kukunda dambudziko iri
Zvaungaita: Gara uchishandisa pfungwa dziri pana Pisarema 139:23, 24 paunonyengetera kuna Jehovha. Durura mwoyo wako uye mukumbire kuti akubatsire kuziva zviri kuita kuti usuruvare.
Kuwedzera pamazano ari pamusoro apa, pane zvinokosha zvaunogona kuwana muShoko raMwari, Bhaibheri. Kuzadza pfungwa dzako nemashoko anovaka anowanika munyaya dziri muBhaibheri kunogona kuita kuti unzwe zvakanaka.—Pisarema 1:1-3.
Kana ukaramba uchingonzwa wakasuruvara
Ryan anoti, “Mamwe mazuva ndinonzwa sokuti zviri nani kuramba ndakarara mumagumbezi.” Ryan anonetseka nechirwere chekunyanya kusuwa (depression). Vanoongorora vanoti vechiduku vanenge 25 pa100 voga voga vanonetseka nerumwe rudzi rwokunyanya kusuwa vasati vasvika pakuva vanhu vakuru.
Ungaziva sei kana uine chirwere chekunyanya kusuwa? Zvimwe zviratidzo zvinosanganisira kugara wakangoti kwindi, kungozviita zindoga, kunzwa kakusafarira zvinenge zvinhu zvose hazvo, kuchinja zvikuru pamadyiro aunoita uye kurara zvisina kutsarukana uye kungozvipa mhosva zvisina basa.
Ichokwadi kuti anenge munhu wose anombova nezviratidzo izvi pane dzimwe nguva. Asi kana zviratidzo izvi zvikaramba zviripo kwevhiki dzakati wandei, wadii kumbotaura nevabereki vako nezvekuonekwa nachiremba? Chiremba anogona kukubatsira kuona kana kusuruvara kwako kuchida kurapwa.
Kana uine chirwere chekunyanya kusuwa haufaniri kunyanya kunetseka. Vakawanda vaiva nechirwere ichi pavakarapwa vakatanga kunzwa zviri nani! Pasinei nokuti kusuruvara kwako kunokonzerwa nedepression kana kuti kwete, yeuka mashoko anonyaradza ePisarema 34:18 anoti: “Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo; anoponesa vaya vakadzvinyirirwa.”
Utano Rugare Uye Mufaro Vechidiki Vanobvunza Kuti Vari Kuyaruka
Zvaungaita Kuti Usasuruvara
Chii chinoita kuti munhu ade kuzviuraya?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaitei Kuti Ndirege Kunyanya Kusuruvara?